लता मंगेशकरको पार्थिव शरिरलाई थुकेको आरोप लागेपछि विवादमा शाहरुख खान, कसले के भने ? - ABNews Nepal
लता मंगेशकरको पार्थिव शरिरलाई थुकेको आरोप लागेपछि विवादमा शाहरुख खान, कसले के भने ?
Feb 7, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, dhamala ko hamala, katathmandu news, latest khabar, latest nepal, latest nepali song, latest ramailo samachar, taja khabar nepal, tajakhabar
एजेन्सी । स्वर कोकिला लता मंगेशकरको आइतबार निधन भयो। कोरोना संक्रमणका कारण अस्पतालमा लामो समयसम्म उपचार गराएकी उनले मृत्युलाई जित्न सकिनन्।
उनको निधनले सिंगो भारतसँग विश्व सांगितीक क्षेत्र स्तब्ध बन्यो। मंगेशकरको अन्तिम संस्कारअघि मुम्बईको शिवाजी पार्कमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मुख्यमन्त्री उद्धव ठाकरेबाहेक राजनीति र फिल्मका थुप्रै चर्चित अनुहार श्रद्धाञ्जली दिन पुगे ।
यीमधये एक थिए शाहरुख खान । तर उनका विषयमा ट्वीटरमा ठूलो विवाद निम्तिएको छ । बिजेपी हरियाणाका आइटी सेलका प्रभावी अरुण यादवले ट्वीटले यो विवादलाई निम्त्याएको थियो । उनले श्रद्धाञ्जलि दिँदै गरेका शाहरुख खानको भिडियो सेयर गर्दै लेखे, ‘के शाहरुख खानले थुकेका हुन् ?’
शाहरुख त्यहाँ आफ्नी सेक्रेटरी पूजा ददलानीसँग पुगेका थिए । एकातिर शाहरुखका हात प्रार्थनाका लागि खुल्ला थिए भने पूजा ददलानीले हात जोडेर लतालाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलि दिइरहेकी थिइन् । त्यसपछि शाहरुख खानले मास्क हटाएर फुके ।
उनले फुकेको कुरालाई थुकको नाम दिएर शाहरुखलाई मानिसले ट्रोल गर्न थाले । यद्यपि, अर्को एउटा तप्काले उनको र पूजा ददलानीको तस्बिरलाई भारतको वास्तविक अनुहार भनेर तारिफ पनि गरिरहेका थिए ।
यो विवादमा थुप्रै चर्चित अनुहार पनि होमिए र शाहरुखको आलोचना गर्न थाले । शिवसेनाकी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले ट्वीट गरिन्, ‘केही मानिस न दुआका काबिल छन् न दयाका, उनीहरुलाई दवा (औषधी) को आवश्यकता छ, मनको विष नष्ट गर्नका लागि ।’
यस्तै, द वायरका संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजनले लेखेका छन्, ‘यो घिनलाग्दो ट्वीट बिजेपीका एक अधिकारीको हो । यसमा अब कुनै शंका छैन कि समाजमा कस्ता मानिसले फोहोर विष फैलाइरहेका छन् । यदि अरुण यादव दुआसँग अनभिज्ञ छन् भन दवा गर्नुभन्दा अघि कसैलाई सोध्न सक्दथे ।’
जफर सुरेशवालाले लेखेका छन्, ‘केही धर्मात्मा मानिस भारतको एकताको यो सुन्दर दृश्यलाई पचाउन सकिरहेका छैन । साँच्चै नै लता मंगेशकर ती व्यक्ति थिइन् जसले मानिसलाई जिउँदो हुँदा एकताको सूत्रमा बाँधिन् र मरेपछि पनि यस्तो गर्न जारी राखिन् । शाहरुख खान पनि यसैमध्ये एक हुन् ।’
फिल्म निर्माता अशोक पण्डिले पनि शाहरुख खानको आलोचना गर्नेलाई जवाफ फर्काए । राणा सफवीले लेखेका छन्, ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान । ’कांग्रेसकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्रले पनि शाहरुख खानको पक्षमा ट्वीट गर्र्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउनेहरुमाथि नै प्रश्न उठाइन् ।
रेडियो जकी सायमाले लेखेकी छिन्, ‘प्रार्थना गर्दा फुक्ने परम्परालाई थुक भन्नेहरुको सोच थुक्न लायक छ । यिनीहरु विष र घृणाको खेती गर्छन् ।’ https://youtu.be/0YDMmh8QHKY
अन्जु पन्तले वर्षौं पहिले गाएको गीत रचनाले गाउँदा जं गीए पुण्य,फोनमै यस्तो च र्का च र्की पर्यो रचनासंग